အကောင်းဆုံးတက္ကသိုလ်များစာရင်းတွင် ၁၃ နှစ်ဆက်တိုက် ASU ဖော်ပြခံရ – ASU Myanmar
အကောင်းဆုံးတက္ကသိုလ်များစာရင်းတွင် ၁၃ နှစ်ဆက်တိုက် ASU ဖော်ပြခံရ
အကောင်းဆုံးတက္ကသိုလ်များစာရင်းတွင် ၁၃ နှစ်ဆက်တိုက် ASU ဖော်ပြခံရ…
အမေရိကန်နိုင်ငံတစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့ အကောင်းဆုံးတက္ကသိုလ်များစာရင်းမှာ Angelo State University ဟာ ၁၃ နှစ်ဆက်တိုက်ဖော်ပြခံရခဲ့ပါတယ်။ ဂုဏ်ပြုခံရမှုဟာ တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ ၄ နှစ်တက်ရတဲ့ တက္ကသိုလ်ကောလိပ်တွေထဲက အကောင်းဆုံး ၁၄% ပဲရရှိတာ ဖြစ်ပါတယ်။ တက္ကဆက်ပြည်နယ်ရဲ့ အစိုးရတက္ကသိုလ်များထဲက ဒီ ၂၀၂၂ စာရင်းဝင်မှာတဲ့ တက္ကသိုလ် ၆ ခုသာရှိပြီး အဲဒီထဲက တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်လို့ ASU ကိုယ်စား ဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။
This never gets old! For the 13th straight year, we’ve been listed as one of the “Best Colleges” in the nation by The Princeton Review! This honor only goes to about 14% of the nation’s four-year colleges, and we’re one of only six Texas public universities to make the 2022 list.
ASU မှာ In-State Tuition Fees နဲ့ တက်ချင်ရင်တော့ ASU-Myanmar ကို အမြန်ဆုံးဆက်သွယ်လိုက်တော့နော်။ Spring Semester (January Intake) အတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူနေတာ အောက်တိုဘာလ ၁၅ ရက်နေ့ဆိုရင် ပိတ်ပါတော့မယ်။ တက်မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ပြီးရင်တော့ အမြန်လေးသာ လျှောက်လိုက်ပါနော်။
PrevPreviousASU ကနေ ဘွဲ့ရပြီးရင် အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ အလုပ်ဆက်လုပ်ခွင့်ရှိလား မေးလာသူများအတွက် ဖြေပေးလိုက်ပါတယ်။
NextASU ကနေ ဘွဲ့ရပြီးရင် အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ အလုပ်ဆက်လုပ်ခွင့်ရှိလား မေးလာသူများအတွက် ဖြေပေးလိုက်ပါတယ်။Next